Adannandie ne Adebɔ​—Nyansahufoɔ Nhu Nea Ɛyɛe a Nkwa Baeɛ
Nsɛm mmienu a ɛwɔ nifa so yi mu nea ɛwɔ he na wode bɛtoa asɛm yi so?
NKWA FI ․․․․․.
SƐ OBI hwɛ saa asɛm yi a, ebia nea ɛbɛba n’adwenem ara ne sɛ nyansahufoɔ bɛka sɛ “adannandie” na nyamesomfoɔ nso aka sɛ “adebɔ.”
Nanso ɛnyɛ berɛ nyinaa na ɛte saa.
Nokwasɛm ne sɛ, nhomanimfo pii a nyansahufo ka ho ka sɛ adannandie nkyerɛkyerɛ no, asɛm wɔ ho.
Gerard yɛ ɔbenfoɔ bi a ɔkyerɛ mmoawammoawa ho adeɛ. Berɛ a ɔkɔ suapɔn no, ɔsuaa adannandie ho adeɛ. Nanso ɔkaa sɛ: “Ɛdu nsɔhwɛ so a, nea akyerɛkyerɛfoɔ no pɛ deɛ metwerɛ ma wɔn, nanso m’akomam deɛ, na mennye nni koraa.”
Ɛbɛsi ha yi, yɛahu sɛ nyansahufoɔ bi mpo nnye nni sɛ nkwa fi adannandie mu. Adɛn ntia? Wo deɛ, ma yɛnhwɛ nsɛmmisa mmienu a ɛkyere nwomanimfoɔ pii adwene: (1) Ɛyɛɛ dɛn na nkwa fii aseɛ? (2) Ɛyɛɛ dɛn na abɔdeɛ ahodoɔ baeɛ?
Hwɛ nea nyansahufoɔ ka fa nkwa ho no sɛ ɛtɔ asom anaa.